टीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा खसेपछि हेर्दा हेर्दै ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लग्यो ज्यान #Exclusive. - Like For Nepal
टीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा खसेपछि हेर्दा हेर्दै ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लग्यो ज्यान #Exclusive.
टीकटक बनाउन लाग्दा सेतिमा खसेपछि हेर्दा हेर्दै ! विबाह गरेको ५ दीनमै टीकटकले लग्यो ज्यान #Exclusive
Prevहस्पिटलले नसकेको बिरामी निको नभएपछि चिहानमै पुगेर आत्मासँग झाँक्रीले भिडन्त गरेर बिरामी निको बनाए।
Next२५ बर्षिय रुपा कुमाललाई श्रीमान ले नै हत्या गरेको आरोप रुपाको् माइती भन्छ।छोरीले धेरै सहेर बसेकी थि।